Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo sheegay cod sir ah oo laga duubay in uu ahaa mid uu ugu talogalay beeshiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo sheegay cod sir ah oo laga duubay in uu ahaa mid uu ugu talogalay beeshiisa
March 16, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa qirtay in uu lahaa cod sir ah oo lagu daabacay online-ka.
Codka oo maalmihii u dambeeyay wareegayay warbaahinta bulshada ayaa Cabdixakiim Maxamed Axmed oo loo yaqaan Dhoobo-daareed kaga hadlay jabhadda uu hoggaamiyo Kornayl Caare oo fadhigeedu yahay magaalada Qardho iyo arrimo kale oo ay kamidtahay in uu dadka reer Qardho ku tilmaamay in ay kasoo horjeedaan xukuumada madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.
Dhoobo-daareed oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa sheegay in codkaas uusan ahayn mid loogu talogalay warbaahinta balse uu u waramayay xubno katirsan beeshiisa.
“Nin iyo reerkiisa wadahadlayay oo is-wareysanayay war hoose buu ahaa xaqna waa ay iigu leeyihiin in ay wax i weydiiyaan dadka aan masuulka u ahay, is-wareysi hoose buu ahaa mid loogu talogalay warbaahin maa ahayn,” ayuu yiri Dhoobo-daareed.
Jabhadda Kornayl Caare
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku tilmaamay jabhadda Kornayl Caare in ay tahay mushkilad ka jirta gobolka.
“Mushkilada hadda jirta oo muuqata oo aan qarsoonayn waa hadda ninka jooga Qardho, oo aad moodin in uu u egyahay nin hadda rabba dalka in uu u qabto Somaliland,” ayuu ku sheegay codka sirta ah.
Dhoobo-daareed ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Deni aysan weli lahayn siyaasad cad oo ku wajahan arrinta jabhadda Kornayl Caare, isaga oo intaas ku daray in xukuumadii hore ee madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali ay magangelyo siisay jabhadaas.
Qolada Qardho dowladda mucaarad bay ku tahay
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku sheegay codka sirta ah in reer Qardho ay mucaarad ku yihiin xukuumada cusub ee Deni.
“Waxaa kale oo iyana jirta qoladaan Qardho laftigeeda hadda joogta dowladda mucaarad bay ku tahay oo nimankii odaashii oo hormuudka u ahaa Qardho dowladan waa ay ku kacsanyihiin,” ayuu yiri.
Qaar katirsan cuqaasha Qardho oo la hadlay warbaahinta ayaa ku tilmaamay hadalka Dhoobo-daareed mid meel ku dhac ku ah bulshada Qardho, ayna waajib tahay in afhayeenku uu raaligelin ka bixiyo.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Midowga Afrika ayaa sheegay in $199.6 milyan oo ah taageero maaliyadeed ay ka heleen Midowga Yurub, dhaqaalahaas ayaa loogu deeqay Howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya, iyadoo dalka Soomaaliya uu isku diyaarinayo doorasho [...]
Meru Governor Peter Munya has expressed concern over the threat by the government of Somalia to ban Miraa importation to the country. Speaking during the 53rd Madaraka Day celebrations held at the Meru National Polytechnic, [...]